क्यान इन्फोटेकलाई थप परिस्कृत गर्छौं : अध्यक्ष शर्मा
प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०७६, सोमबार २०:१३
क्यान महासंघ बाँके शाखाको आयोजनामा फागुन २० देखि २४ गतेसम्म नेपालगन्जमा हुने क्यान इन्फोटेक मेलाको तयारी तिव्ररुपमा भइरहेको छ । पहिलो पटक रोबटिक फाईट सहितका अन्य प्रविधि भित्राएको मेला यस पटक विशेष हुने बताईएको छ । आज हामीले क्यान ईन्फोटेकको चौथो संस्करणको तयारीका सन्दर्भमा क्यान महासंघ बाँकेका अध्यक्ष रमणी प्रसाद शर्मासँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौं ।
क्यान इन्फोटेक मेला भनेको के हो ?
विश्वमा सुचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्रमा भएका विकास तथा नयाँ नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको मेलालाई हामीले ‘प्रभु पे क्यान ईन्फोटेक २०२० ईन एशोशिएसन विथ वोल्र्ड लिंक’ नाम दिएका छौं । यसलाई संक्षिप्तमा क्यान इन्फोटेक मेला भन्न सकिन्छ ।
मेलाको उद्धेश्य के हो ?
विश्वबजारमा आएका नयाँ प्रविधिका बारेमा जानकारी प्रदान गर्दैै त्यस्ता प्रविधिको प्रयोगकालागि उत्प्रेरीत गर्नु नै मेलाको मुख्य उद्धेश्य हो । पछिल्लो पुस्ता प्रविधिसँग धेरै नजिक छन । यद्यपी पछिल्लो समय बजारमा आएका नयाँ टेक्नोलोजीका बारेमा धेरैलाई ज्ञान नहुन सक्छ । हामी मेलाको माध्यमबाट त्यस्ता प्रविधिहरुलाई आम नागरिकसम्म पुर्याउन चाहन्छौं । क्यान ईन्फोटेकको चौथो संस्करणमा हामीले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीहरुलाई मेलामा सहभागी गराई प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने वातावरण सृजना गरेका छौं ।
मेलाको तयारी कस्तो छ ?
हामीले मेलाकोलागि निर्धारण गरेको समय नजिकिदैं छ । त्यसैले मेलाको तयारीलाई तिब्रता दिएका छौं । विभिन्न उपसमिति बनाएर मेलाकालागि आवश्यक भौतीक संरचना निर्माण तथा प्राविधिक तयारी थालिसकेका छौं । अन्तिम समयमा गर्नुपर्ने तयारी बाहेक अन्य काम पहिले नै सक्ने गरी हाम्रो टिकले काम गरीरहेको छ ।
मेलामा कतिवटा स्टल रहने छ ?
मेलाको मुख्य प्रदर्शनी हलमा ९४ वटा प्रदर्शनी स्टल राखिने छन । जसअन्तर्गत हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टीनेन्स, पावर सोलुसन्स्, मोवाईल एसेसोरिज, डिलर र डिस्ट्रिव्युटर्स, ईन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिकम्युनिकेशन, बैंक, आई सीटी कलेज, शैक्षिक परामर्श केन्द्र ट्रेनिङ्ग ईन्स्टिच्युट, सफ्टवेयर सोलुसन, पेमेन्ट सोलुसन्स् र विभिन्न नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी स्थानिय विद्यार्थीहरुले बनाएका प्रविधियुक्त हाडवेयर र सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित सामाग्रिहरुका स्टल रहने छ ।
मेलाको मुख्य बिशेषता के हुन ?
यसपटक बिगतको भन्दा परिस्कृत क्यान इन्फोटेक आयोजना हुँदै छ । बिगतको वर्षभन्दा फरक अनुभुती हुने छ । बिशेष कम्प्युटर, मोबाईल तथा सूचना प्रविधिको बृहद प्रदर्शनी गर्दैछौं । अनलाइन अर्निग, आईटी सचेतना, अनलाइन बिलिगं लगायत बिभिन्न विषयमा दैनिक बृहद प्रदर्शनी हुने छ भने रोबटिक फाईट प्रतिस्पर्धा गरिने छ ।
त्यस्तै नेपाली बैज्ञानिकद्धारा निर्मित रोबट तथा अन्य प्रविधिहरुको प्रदर्शनी, सफ्टवेयरको विकास गर्ने ह्याकाथुन प्रतियोगिता गरिने छ भने पब्जी, फिपा लगायतका बिभिन्न खेलहरु हुने छ । एग्रीकल्चर ड्रोनको प्रदर्शनीका साथै फेसबुक र टिकटक प्रतिस्पर्धा समेत संचालन गर्ने योजनामा छौं ।
मेला प्रवेशको व्यवस्था कसरी मिलाउनुभएको छ ?
५ दिनसम्म संचालन गरीने मेला अवलोकनका लागि सर्वसाधारणहरुलाई ३० रुपौयाँ र विद्यार्थीहरुलाई २० रुपौयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको छ । अनलाईन माफर्त टिकट खरीद गर्नेलाई ५ रुपौयाँ छुटको ब्यवस्था गरीएको यस पटकको मेलालाई कागजरहित बनाउन टिकट सिस्टमको समेत ब्यवस्था गरेका छौं । यसका अलावा मेलामा सहभागी हुने पत्रकार, अपाङ्ग, अशक्त तथा ७० वर्ष उमेर काटेका नेपाली नागरिकहरुलाई निशुल्क प्रवेशको ब्यवस्था मिलाएका छौं ।